ဒီရောဂါစ ဖြစ်ထဲက ကိုယ်က အချိန်မရွေးသေနိုင်တယ်ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကို ဝမ်းနည်းစွာအသိပေးလာတဲ့ အဆိုတော် အိအိချွန်…. – Cele Oscar
ဒီရောဂါစ ဖြစ်ထဲက ကိုယ်က အချိန်မရွေးသေနိုင်တယ်ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကို ဝမ်းနည်းစွာအသိပေးလာတဲ့ အဆိုတော် အိအိချွန်….
June 20, 2022 By L YC News
ပရိသတျကွီးရေ တေးသံရှငျ အိအိခြှနျကတော့ မွနျမာ့သံစဉျသီခငျြးကောငျးတှေ နဲ့ အတူ အားလုံး ရဲ့အားပေးမှုကို အပွညျ့အဝရရှိထားပွီး အောငျမွငျတဲ့ အဆိုတျော တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ တေးသံရှငျ အိအိခြှနျ က ဦးနှောကျအကြိတျရောငျ ရောဂါခံစားနလေို့ အခြိနျမရှေး သနေိုငျကွောငျး ဝမျးနညျးစှာ ရငျဖှငျ့လာတာလညျး ဖွဈပါတယျ။အိအိခြှနျ ကဦးနှောကျအကြိတျလေး က အမွငျအာရုံကွောပျေါမှာ ပိမိနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ မကျြလုံး ဝါးတယျ အမွငျမကွညျတော့ဘူး ဆရာဝနျ ကလညျးကားမမောငျးခိုငျးတော့ဘူး ကားမောငျးရငျ တိုကျမယျ ဖုနျးတှေ အမွဲမကွညျ့ဖို့လညျးမှာထားတယျ ဘာလို့ဆို အမွငျအာရုံ ကှယျနိုငျတဲ့အတှကျဂရုစိုကျဖို့မှာထားတယျ။
ပရိသတျတှကေို မပွောပဲနခေဲ့တာအခုမှ သာဖှငျ့ပွောပွတာပါဒီရောဂါစ ဖွဈထဲက ကိုယျက အခြိနျမရှေးသနေိုငျတယျ တဈယောကျထဲ သမားဖွဈတဲ့အတှကျဘာမှပူပငျစရာစှဲလနျးစရာမရှိဘူး သလေို့ရှိရငျတောငျ မှသပြေျောပွီသလေို့ရပွီ အမွဲတမျးသဖေို့ တှေးထားပွီးသားပါဆိုပွီး အိအိခြှနျ ကပွောပွလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော။
Video Credit ; Popular Journal
ပရိသတ်ကြီးရေ တေးသံရှင် အိအိချွန်ကတော့ မြန်မာ့သံစဉ်သီချင်းကောင်းတွေ နဲ့ အတူ အားလုံး ရဲ့အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားပြီး အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ တေးသံရှင် အိအိချွန် က ဦးနှောက်အကျိတ်ရောင် ရောဂါခံစားနေလို့ အချိန်မရွေး သေနိုင်ကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာ ရင်ဖွင့်လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။အိအိချွန် ကဦးနှောက်အကျိတ်လေး က အမြင်အာရုံကြောပေါ်မှာ ပိမိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် မျက်လုံး ဝါးတယ် အမြင်မကြည်တော့ဘူး ဆရာဝန် ကလည်းကားမမောင်းခိုင်းတော့ဘူး ကားမောင်းရင် တိုက်မယ် ဖုန်းတွေ အမြဲမကြည့်ဖို့လည်းမှာထားတယ် ဘာလို့ဆို အမြင်အာရုံ ကွယ်နိုင်တဲ့အတွက်ဂရုစိုက်ဖို့မှာထားတယ်။
ပရိသတ်တွေကို မပြောပဲနေခဲ့တာအခုမှ သာဖွင့်ပြောပြတာပါဒီရောဂါစ ဖြစ်ထဲက ကိုယ်က အချိန်မရွေးသေနိုင်တယ် တစ်ယောက်ထဲ သမားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှပူပင်စရာစွဲလန်းစရာမရှိဘူး သေလို့ရှိရင်တောင် မှသေပျော်ပြီသေလို့ရပြီ အမြဲတမ်းသေဖို့ တွေးထားပြီးသားပါဆိုပြီး အိအိချွန် ကပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဝိုင်းစုက မန်နေဂျာလုပ်ပေးပြီး အလုပ်တွေဆက်တိုက်လက်ခံပေးနေလို့ ပျော်နေရှာတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်…
အောင်ရဲလင်း ရဲ့မွေးနေ့ကို မမေ့မ‌လျော့ဘဲ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဟိန်းဇေ……